I-Chinhoyi Tree House - Igumbi lokulala laseZambia - I-Airbnb
I-Chinhoyi Tree House - Igumbi lokulala laseZambia
I-Orange Grove iyindawo enokuthula yaseChinhoyi. Indlu igcwele ukukhanya nendawo enengadi enkulu evulekile nezihlahla eziningi ezigcwele impilo yezinyoni eziningi. Indawo yokupaka ekhaviwe iyatholakala. Indawo yezitolo enkulu iyi-1.5 km ukusuka phansi komgwaqo. Ikhishi likhulu futhi linazo zonke izinsiza futhi kokubili ikhishi negumbi lokudlela kunezicabha eziyingilazi ezivulekele endaweni yokubhukuda. Kukhona indlu yokugezela kanye nendlu yangasese ngaphesheya kwephasishi kusuka ekamelweni lakho.
Sibusiswe ngesimo sezulu esimangalisayo lapho izinsuku eziningi, ngisho nangenkathi yemvula, uzokwazi ukubona isibhakabhaka esiningi esiluhlaza futhi uma kufanele uphumele ngaphandle kwendlu ebusuku uyomangala ngokubuka okukhazimulayo kwesibhakabhaka ebusuku. Isimo sezulu sethu sivame ukufudumala kuya kushisa, izinyanga ezibandayo ziqala ngoMeyi kuya ekupheleni kuka-August kanti inkathi yethu yezimvula iqala ngoNovemba kuya ekupheleni kukaFebhuwari. Phakathi nezinyanga ezibandayo ngeke udinge izingubo ezifudumele phakathi nosuku, kuphela ekuseni nakusihlwa. Igumbi ngalinye lifakwe isiphephetha-moya ukuze uhlale upholile imini nobusuku.
Inkonzo yokuhlanza ihlinzekwa njalo ekuseni (ngaphandle kwamaSonto ekuseni) ukusiza ngezitsha nokugcina phansi kuhlanzekile. Umlimi uzobe esemagcekeni enza imisebenzi yakhe evamile yansuku zonke, ngaphandle kwangoMgqibelo ntambama noma ngeSonto. Kukho konke ukuhlala kwakho unogada uzobe ekhona kusukela ngo-6 ntambama kuya ku-6 ekuseni futhi uzokusiza ngokuvula amasango okungena endaweni kanye nokuqinisekisa ukuthi ayikho impahla yakho elahlekayo. Sinelondolo lapho ungakwazi khona ukuwasha izingubo zakho noma ngemali encane lokhu ungenzele khona. Izithelo ezintsha nemifino kuzotholakala, uma kusesikhathini sonyaka, ukuze uzijabulele futhi mahhala. Kukhona ingadi yemifino etholakalayo ukuze kube lula kuwe ukupheka. Kunendawo yokupaka eyanele eyanele ngaphakathi kwezakhiwo okungenani izimoto ezi-4 kanye nesikhala esingeziwe sokupaka izimoto nakuba singekho ngaphansi.
Njengoba ujikela endaweni engaphansi kwe-Orange Grove yaseChinhoyi uzobona ngakwesobunxele sakho i-Orange Grove Motel ongayivakashela ukuze uthole ukudla noma nje ukuzijabulisa namalungu omphakathi wendawo. Ingaphansi kwekhilomitha elilodwa ukusuka eThe Chinhoyi Tree House. Indawo le inezinye izindlu kodwa kunesikolo samabanga aphezulu esingapha komgwaqo weChinhoyi Tree House. Ngezinye izikhathi zingaba nomsindo omncane kodwa umsindo awuvamile ukuhlala isikhathi eside. Uma uhamba ngomgwaqo odlula e-Orange Grove Suburb uzofika esiqongweni segquma elizokunikeza umbono omuhle wedolobha lonke laseChinhoyi namapulazi azungezile. Uma uqhubeka nalo mgwaqo uzofika ekolishi iLomagundi okuyisikole samabanga aphansi nesesekondari esisezindaweni ezinhle zesikole. Njengoba sekushiwo kakade, iChinhoyi iyikhaya le-Chinhoyi Limestone Caves engavamile futhi okufanele ivakashelwe. Emagcekeni kaMasipala waseChinhoyi uzothola isibonelo esihle kakhulu Sesihlahla i-Baobab futhi nalokhu kufanele ukuvakashelwa.